Global Voices teny Malagasy » Suya Nizeriana! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Oktobra 2018 16:47 GMT 1	 · Mpanoratra Edward Popoola Nandika Sylvia Aimée
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Septambra 2005)
Loharano: Sary an'i FischerFotos  tao amin'ny Wikipedia
Suya (vakiana hoe Su-hu-ya)
Io no anarana didin-kena nasaly teo ambony koveta mahamay tsy misarona, miaraka amin'ny menaka, tongolo ary sira.
Sakafo iray malaza eny anivon'ny saranga Nizeriana manan-karena sy antonony.ny Suya. Matetika ny Suya dia vokarina isankariva eny an-dalambe, trano filalaovana, hotely ary ireo fivoriana ara-tsosialy. Fahaizamanao manokana ananan'ireo foko “Hausas” Nizeriana ny Suya.
Didin-kena Suya iray dia afaka hamaritana ny fijerinao manontolo ny hena. Mba hihinanana Suya na aiza na aiza “toerana misy Suya”, toloran'ireo “Mala” tomponandraikitra ampahany kely ho andramana maimaimpoana aloha ianao. Mandidy didiny kely iray izy ary manasa anao hanandrana ny zavatra azony atolotra. Amin'io andran-tsiro voalohany io, misy voasarika ny hikaroka ny paosiny rehetra hividianana ilay hena maha-rarak'ivy.
Proteina tsara kalitao ny Suya, tsy ahitana an'ireo akora simika izay antsointsika amin'ny hoe laro ao anatin'ny fahandroan-tsakafo maoderina. Tia milalao ireo Nizeriana ary tsy misy tsara lavitra noho izany hoe manana Suya mafana anao miaraka amin'ny divay vita tamin'ny voanio na labiera nizeriana iray tavoahangy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/06/126706/